Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Flash Drive in Lugood
Sida flash drives noqday caan ah oo la wadaago iyo files wareejinta, mid isu heli kartaa la kuwan raadkaygay kulul in ay u baahan yihiin si ay u gudbiyaan si Lugood laakiin aan ogayn sida loo. Lugood waa hab fiican oo ay ku kaydiso files warbaahinta aad ula awoodda ay leedahay in aad kala bixiso albums iyo fannaaniin hab dheeraad ah habsami leh. Sababtan darteed, dad badan oo doonaya in ay ka flash drive wareejiyo music in Lugood.
Dhab ahaantii, Lugood ma taageeri qaabab music oo dhan. Qaabab in taageero Lugood yihiin; MP3, AAC, M4A, regelingen, M4R, M4B, AIFF iyo AIF, kuwaas oo aad iyaga si toos ah nuqul karaa in Lugood.
Sidaas asal ahaan, gabayo flash ah waxa loo qaybin karaa laba nooc: Lugood kuwa la jaan iyo Lugood kuwa leheyn. Lugood songs socon lagu dari karaa si Lugood Library si toos ah. Lugood leheyn music aan la keeno karo in Lugood oo dhan. Si aad u gaarto goolkii, waxaad isku daydaa inaad workaround ah. In socda, 2 xal la siiyaa aad si xor ah si ay u gudbiyaan oo dhan music (qaabab oo dhan) ka flash ah in an ka kaaftoomi Lugood Library.
Xalka Lugood 1. Transfer Songs taageerayaan ka Flash Drive ah in Lugood Library
Xalka 2. Transfer Lugood oo dhan Songs (socon / leheyn) ka Flash Drive in Lugood Library
Video Tutorial u Sida loo isticmaalo iPad sida External Hard Drive
Marka songs waa in MP3, AAC, M4A, regelingen, AIF, AIFF, M4R, iyo M4B, waxaad si toos ah iyaga ku dari kartaa in aad Lugood Library.
Connect aad flash drive si aad u computer
Geli aad flash la wado galay dekedda USB ah on your computer iyadoo music ka socon aad rabto in lagu wareejiyo.
Double guji Lugood icon si ay u abuurtaan, ka dibna dooro "rabtid" oo aad ka heli kartaa oo ku saabsan Edit "menu.
rabtid Advanced "adigoo gujinaya" Advanced "laba doorasho u baahan in la hubiyaa on Doorashadan Tag ah":
1) Ka dhig Lugood Media Folder abaabulay
2) files Copy in Lugood Media folder markii isagoo intaa ku daray in maktabadda.
Bedelka music ka flash in Lugood ah.
On menu Lugood ah, dooro "File", ka dibna "Add file maktabada" ama "Add folder maktabada" kaas oo ay ku xiran tahay waxa aad doonayso.
Browse your computer si aad u ogaato flash drive, waa in muuqan hoos "My Computer". Dooro heeso ama folder la music si ay u dajiyaan si Library Lugood ka flash ah.
Haddii kale, waxaad u furi kartaa flash drive, xulo heeso ama folder la music aad rabto in aad soo dhoofsadaan, nuqul, on Lugood, halka ay furmo suuqa music, dooro "Edit" ka dibna "paste".
Geedi socodka waa in aysan qaadan muddo dheer inkastoo ay ku xirnaan doontaa tirada heeso aad soo degida, in ka sii badan, ay muddo dheer uu ku qaato.
Xalka 2. Lugood Transfer oo dhan Songs (socon / leheyn) ka Flash Drive in Lugood Library
Waxaa jira hab kale si ay u gudbiyaan Lugood Songs taageerayaan ka Flash Drive in Lugood Library si fudud wondershare software TunesGo.
Nasiib darro, haddii gabayo aad flash drive ma aha ee qaabab kor ku xusan oo ay taageerayaan Lugood, waa in aad isticmaasho qalabka waxaa xirfadeed "TunesGo" loo wareejiyo Library Lugood ah. Halkan, waxaan ka hadlaan sida ay u gudbiyaan Lugood, kuwaas oo heeso aynan ka flash ay u Library Lugood ah.
Download iyo rakibi TunesGo
Riix badhanka Download hoos ku qoran si aad u hesho xirmo TunesGo rakibo oo ku xidh kombiyuutarka. Kala TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) labadaba la heli karo waa hadda. Dooro version saxda ah ee computer.
Connect flash la music aad rabto in aad soo dhoofsadaan in Lugood si aad u computer ay u gashan galay dekedda USB your computer ee.
Beddelaan Lugood leheyn music in MP3 la TunesGo haddii loo baahdo.
Laga soo bilaabo bidix ee suuqa ugu weyn ee TunesGo, waxaad ka arki kartaa 'Media' item ah. Waxaa Click to Muujin daaqadda 'Music'. On the 'Music' window, dooro 'dar Folder' ama 'dar File' adigoo gujinaya saddexagalka 'dar' ka yar. Markaas dhirtuba aad computer inay dajiyaan music ka flash ah. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, si deg deg ah arbushin doonaa, weydiinaya in aad si loogu badalo heeso aad u qaab qalab Apple taageeray. Riix 'Haa' si ay awood qaab beddelidda.
Bedelka music ah oo ay taageerayaan iyo music u gediyay maktabadda Lugood
Double guji Lugood icon si ay u abuurtaan, ka dibna dooro "rabtid" oo aad ka heli kartaa oo ku saabsan "menu Edit '.
Tag ah " rabtid Advanced "adigoo gujinaya" Advanced "laba doorasho u baahan in la hubiyaa on Doorashadan, dhig Lugood Media Folder abaabulay. Copy files si folder Lugood Media markii isagoo intaa ku daray in maktabadda. On menu Lugood ah, dooro "File", markaas "Add file maktabada" ama "Add folder maktabada" kaas oo ay ku xiran tahay waxa aad doonayso. Browse computer si aad u hesho flash drive (haddii ay tahay meesha aad ku badbaadiyey songs la badaley by TubesGo), waa inuu noqdaa muuqda ka yar "My Computer". Dooro heeso ama folder la music si ay u dajiyaan si Library Lugood ka flash ah. Haddii kale, waxaad u furi kartaa flash drive, xulo heeso ama folder la gediyay music aad rabto in aad soo dhoofsadaan, nuqul, on Lugood, halka uu furmo suuqa music ah, dooro "Edit" ka dibna "paste". Geedi socodka waa in aysan qaadan muddo dheer inkastoo ay ku xirnaan doontaa tirada heeso aad soo degida, in ka sii badan, ay muddo dheer uu ku qaato.
Haddii kale, waxaad awoodi karaa inuu wareejiyo music toos ah uga soo TunesGo in Lugood dib markii diinta doorataa files music ah ka dib markii diinta iyo ku dhufo "Dhoofinta in Lugood Library 'ka soo daadiyaa liiska' dhoofinta '.
> Resource > Lugood > Talooyin ku beddelashada Music ka Flash Drive in Lugood